Tag Archive for "कम्युनिष्ट पार्टी" - कम्युनिष्टलाई एकताबद्ध बनाउने ‘मिसन’ पूरा भएको छैन : अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी 'नेकपा' का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सबै कम्युनिष्टलाई एकताबद्ध बनाउने ‘मिसन’ अझै पूरा नभएको बताए । तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टी नेपालको विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका नेता कार्यकर्तालाई आज नेकपा प्रवेश गराउँदै उहाँले नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको चाहना पूरा गर्ने ऐतिहासिक आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर कम्युनिष्ट पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने पहलको थालनी गरिएको बताए ... थप पढ्नुहोस्
हाँसको बथानमा बकुल्लो लामो समय बस्न सक्दैन । त्यस्तै नेपालको प्रजातान्त्रिक मोर्चामा कम्युनिष्ट पनि सधैं टिक्ने कुरा भएन । हाल देशको शासन सत्ताको भार सम्हाल्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अर्थात ने क पा पनि यसबाट अछुतो रहने प्रश्नै भएन । नेपाली जनताको दुईतिहाई समर्थन नजिक हैसियतमा छ यो सरकार । गएको निर्वाचनमा मतदाताले त्यो हैसियतमा पु¥याए यताका उसका गतिविधि अधिनायकवादतर्फ उन्मुख छन् । यो श्रृंखलाको प... थप पढ्नुहोस्
नेकपा एकताको एक वर्ष पुरा, यस्तो छन् बैठकका निर्णय !
काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी 'नेकपा'को एकताको एक वर्ष पुगेका अवसरमा र मदन आश्रित स्मृति दिवस मनाउन आज पार्टी मुख्यालय धूम्बाराहीमा तयारी बैठक बसेको थियो। पार्टीका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको तयारी बैठकले तत्कालीन नेकपा 'एमाले'को पार्टी कार्यालय मदननगर बल्खुमा बिहान ८ः३० बजे विशेष कार्यक्रमको आयोजना गर्ने निर्णय गरेको केन्द्रीय सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठले जानकार... थप पढ्नुहोस्
चीनमा नेपाली नेतालाई रातो कार्पेट तर नेपाली उत्पादनलाई भने फलामे ढोका !
काठमाडौं । मित्र राष्ट्र चीनमा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार र नेपालमा पनि कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार छ । दुवैका आस्था र विश्वासका केन्द्र माक्र्स, लेनिन र माओ नै हुन । हसिँया -हतौडा अंकित झण्डाप्रति दुवैतर्फ ठूलो श्रद्धा छ । पछिल्लो समय चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको निमन्त्रणामा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुको चीन भ्रमण पानी–पँधेरो जस्तै हुने गरेको छ । चीनले ज्वाई र भाञ्जालाई जस्तो साड्षोप... थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको ७० वर्ष बितेको छ । सात दशकपछि निर्वाचनको माध्मबाट दुई तिहाइ मतसहितको सरकार गठन गरेको छ । यसलाई नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको ठूलो उपलब्धिको रूपमा लिइएको छ । शक्तिशाली सरकार गठनसम्मको यात्रा तय गर्न कम्युनिष्ट पार्टीले थुप्रै टुटफुट र एकताको श्रृङ्खला पार गर्नुपरेको छ । तत्कालीन राणा सरकारको विरोधमा जनमत निर्माण गरी देशमा सामाजिक रुपान्तरण र जागरणका ल... थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग वार्तामा बस्न सदा तयार रहेको स्पष्ट पारेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले चन्द नेतृत्वको नेकपासँग वार्तामा बस्न सरकार तयार रहेको प्रष्टयाएका हुन् । तर त्यसका लागि चन्द नेतृत्वको नेकपाले हतियार बिसाउनुपर्ने सरकारको सर्त रहेको मन्त्री बास्कोटाले भनाई छ । बिहिबार मन्त्रिपरिषद बैठकबारे जानकारी दिन आयोजित ... थप पढ्नुहोस्
१७ असोज, काठमाडौं । मुलुकलाई समृद्धि र समाजवादतर्फ उन्मुख गराउन एउटै कम्युनिष्ट पार्टीको आवश्यकता बोध सहित नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नयाँ शक्ति नेपालबीच संयुक्त एकता संयोजन समिति गठन भएको छ । आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा तालमेल र निर्वाचनपछि पार्टी एकीकरण गर्नेलगायत छ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका यी दलका शीर्ष नेताहरुले यस अभियानमा अन्य साना वाम... थप पढ्नुहोस्